यी जोगी डाक्टरलाई मर्न दिने कि अब केही बोल्ने ? - Dainik Nepal
यी जोगी डाक्टरलाई मर्न दिने कि अब केही बोल्ने ?
दैनिक नेपाल २०७४ साउन २७ गते १९:०६
राजनीति नगरेका, कुनै लोभ लाभ नभएका एउटा सात्विक डाक्टरले देशका जनताको स्वास्थ्यको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेको इतिहास संसारमै छैन।
पूरै अठार दिन भयो जोगी डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा छन्। उनले अनसन बसेरै बनेका बिगतका बिभिन्न आयोगहरुले ठम्याएका बुँदाहरु समेटेर बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन अहिले संसदमा बिचाराधीन छ। उनका मागहरुको एउटै सार छः मेडिकल शिक्षालाई सर्व सुलभ गरौँ, जनताका छोराछोरीहरुलाई डाक्टर बनाऔँ । तर उनीसँग बिगतमा भएका सहमतिहरु कुल्चेर उनकै मागको धज्जी उडाएर संसोधनसहितको प्रस्ताव हालिएको छ, जसले डा केसीका होइन्, मेडिकल माफियाका मागहरु सम्बोधन गर्छ। एघारौँ चोटीसम्म उनले ज्यानको बाजी लगाएर सत्याग्रह गर्नुमा उनको कसैसँग पूर्वाग्रह छैन, उनले कसैको लागि केही कमाउनु पनि छैन्, जीवनको उत्तरार्धमा उनलाई नेता बन्नु पनि छैन्।
म चिकित्सा शिक्षा एेनमा भएका प्रविधिक कुराहरुमा नगई सामान्य कुराहरु मात्र उठान गरेर डा केसीको माग ९५ प्रतिशत जनताको माग हो भन्ने प्रष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु।
सामाजिक मिडियामा धेरै शुभ चिन्तकहरुले आई एम विथ डाक्टर केसी भनेर ऐक्यवद्दता जनाइरहेका छन्, शुभेच्छुकहरुले उनको समर्थनमा बिचारहरु लेखेर सरकार र सरोकारवालालाई दवाव दिएका छन्, तर न त सरकारले सुनेको छ, न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले नै सुनेको छ। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर परोक्ष रुपमा दुबै पक्ष मिलेको प्रष्ट छ। किनभने सबै जसो ठूला दलका नेता कार्यकर्ता कि त त्यही स्वास्थ्यको ब्यापारमा छन् कि त मेडिकल कलेज संचालकहरुको दबदबामा छन्।
आफूलाई बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र भन्ने राजनैतिक दलको निर्देशनमा टायर बालेर सड़क बन्द गरेर तोडफोड गर्ने बिद्यार्थी संगठनहरु पनि डा केसीको मागलाई किन नजरअन्दाज गरिरहेका छन् त्यो पनि भनिरहनु पर्दैन।
राजनीति र प्रशासन दिन दिनै यतिसम्म भैरहेको छ कि करोड भन्दा तलका भ्रष्टाचारका समाचार सुन्न मुश्किल परिरहेको छ। त्यसमाथि मेडिकल क्षेत्रका देखिने र नदेखिने भ्रष्टाचार त बाहिर आउनै सकेका छैनन्।
नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई गुणस्तर र भूगोलको मापदण्ड तोकेर राजधानी बाहिर पनि खोलेमा आम जनता लाभान्वित हुन्छन् भन्ने डाक्टर केसीको माग कसरी नाजायज हो ? कालिकोटमा रगतको कमी भएर मर्ने आमाहरु र झाडा पखालाले मर्ने बालबालिकाहरुको समाचारले यी सांसदहरुलाई किन पोल्दैन ? उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पत्तालको छतबाट हाम फालेर नागरिक मर्दा त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ?
चिकित्सा शिक्षामा नेपाली कांग्रेसको सरकारले नीजिकरण गरेर सबै मेडिकल कलेज नाफामुखी उद्देश्यका साथ मुख्य रुपमा राजधानी र ठूला अनि सुगम शहर आसपास थुप्रिए, यसले दुर्गमका गरिब र निमुखा जनता स्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए। यही देखेर अब राजधानी र मुख्य शहरहरुमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकेर जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खोल्न प्रोत्साहित गरौं, सरकार आफैंले प्रत्येक प्रदेशमा एकएक वटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलोस भन्ने सिधा र समाजवादी चिन्तनलाई सबै नेपालीले जायज भनिरहेकै छन्, दलका कार्यकर्ताहरुले भनेकै छन्, डा केसीका माग जायज छन् यी माग पूरा हुनैपर्छ। तर, कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेका हाम्रा प्रतिनिधिहरु यिनै जायज मागहरु किन बुझ्दैनन् वा नबुझेको नाटक गर्छन् ।
मेडिकल कलेजहरुको खस्किँदो गुणस्तरीयताबाट आज धेरै बिरामीहरुले राम्रो सेवा पाइरहेका छैनन्, पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्र डाक्टर पढ्न पाउने र सामान्य जनताका छोरा छोरीले ६० ७० लाख खर्चेर पढ्न नसकिरहँदा शुल्कमा एकरूपता गर्नु भनेको नाजायज हो ? पूर्वाधार, जनशक्ति, सरसफाइ, उपचार सबै हिसाबले तल्लो तहको सेवा दिएका मेडिकल कलेजका अवस्था सुधारौँ भन्नु कहाँनिर गलत भयो । अनि फेरि अस्पताल नखोलौँ भनेर डा केसीले कहिँ कतै भनेकै छैनन्।
सिधा कुरा छ, मेडिकल कलेजका लागि पहिलो मापदण्ड नै सफल अस्पताल सञ्चालन हो। सफलतापूर्वक नचलेका अस्पत्तालमा बिद्यार्थी डाक्टरहरुले के सिक्छन् ? बिगतमा मेडिकल कलेजको अनुगमन हुँदा नक्कली बिरामी लगेर राख्ने मेडिकल कलेजलाई नियमन गरौँ भन्ने डा. केसी कसरी गलत भए ?
सबैलाई थाहा छ, अस्पताल पुग्यो भने बिरामीलाई कसरी लुटिन्छ ? बिभिन्न परीक्षण, उपकरण,औषधि, क्याबिन, बेड तथा नानाथरी मनोमानी शुल्कहरुले गर्दा मान्छे हत्तपत्त अस्पत्ताल नै जाँदैन, गएपछि ऋणको भारले अझ बिरामी पर्छन्। फर्मासियुटिकल कम्पनी, ल्याब र अस्पत्तालका डाक्टर र कर्मचारीबीचको कमिशनले मूल्यको कुनै बिधिवत ब्यवस्था नै छैन, यसै बिसंगतिलाई नियमन गरौँ भनेर हाम्रै प्राणको लागि सत्याग्रह गरेका डा केसी बारे हामीले सोच्ने कहिले ?
देशमा अहिले भएको प्रमुख समस्या भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको प्रमुख आवश्यकतामाथिको नीजिकरण हो जसले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल झन् बढेको छ। युरोप अमेरिकामा जस्तो बिद्यालय र अस्पतालमा सरकारी नियमन र लगानी नभएसम्म देश उभो लाग्दैन। डाक्टर केसीको आन्दोलनको मूल मर्म नै यही हो।
केही स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुले डाक्टर केसीलाई बदनाम गर्ने गरी उनको अनसनको बिरुद्दमा बिष बमन गरिरहेका छन्, किनकी डाक्टर केसीका माग पूरा भए भने उनीहरुको ठूलो सपना तुहिन्छ। तर डाक्टर केसीका मागहरु जनताका माग हुन्। राजनीति नगरेका, कुनै लोभ लाभ नभएका एउटा सात्विक डाक्टरले देशका जनताको स्वास्थ्यको लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेको इतिहास संसारमै छैन। यस्ता निष्ठाका प्रतीक डाक्टरको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन।
भोलि सरकारको बहिरोपन, सांसदहरुको निकृष्टता र हामी जनताहरुको खबरदारी नपुगेर यी जोगी डाक्टर मरे भने मेडिकल माफियाहरुको हाईहाई हुनेछ र साधारण जनताहरुको स्थिति दयनीय हुनेछ। बेलैमा सबै सचेत भएर यी निष्ठाका प्रतीक डाक्टरको जीवनरक्षा गरौँ न है !
यो निष्ठाको लडाईमा साथ दिएका सबै नागरिक समाज र विवेकशील साझा पार्टीलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अरु दलहरुको पनि ढिलो नगरी घैँटोमा घाम लागोस् ।